Kutsvagisa maitiro uye kushandiswa kweMBR-Indasitiri nhau-Shenzhen SH-MBR Technology Co, Ltd.
Kutsvagisa maitiro uye kushandiswa kweMBR
1. MBR yekutsvagisa maitiro
Muma1960s, kusanganiswa kweyakavhurwa sludge bioreactor uye kuyambuka-kuyerera membrane kusefa kunoona iko kushandiswa kweMBR mune yakasviba kurapwa kwekutanga. Muna 1989, vaongorori vakaisa membrane module mukati me bioreactors, vachipaza kuburikidza nekufambira mberi kweyakaunganidzwa MBR reactors Kubva kuma1990, nekuda kwekuenderera kuri kuwedzera kwemembure flux, membrane kusvibisa kudzora tekinoroji uye membrane zvinhu zvakagadziridzwa zvakanyanya, mutengo we membrane bioreactors uri kudzikira nekudzika, uye maitiro aya ave kutariswa zvishoma nezvishoma. Kubva muna 2006, huwandu hwese hwema membrane bioreactors anoshandiswa pasirese akasvika US $ 216 mamirioni. Zvichireva, kukura kweChina kwakatanga kunonoka, asi kukura kwayo kuri kukurumidza, uye kukura kwayo kuri kukurumidza zvakanyanya kupfuura avhareji yekukura kwepasirese. Parizvino iri kushandiswa mushe pakurapa kweseji.
2. Kushandiswa kweMBR
(1) Kushandiswa kweMBR mukushambidzwa kweseji yemaguta
Mukupera kwema1990, pamwe nekubuda kweMBR yakasanganiswa, kuiswa kwema membrane reactor mune yekurapa tsvina yemaguta yakagadziriswa nekukurumidza. Kubva muna 2005, 219 MBR yemaguta ekuchenesa tsvina mapurojekiti akapedzwa muNorth America. Kunyangwe China yakatanga kunonoka, yakawedzera nekukurumidza. Parizvino, kune akawanda mapurojekiti ari kushanda kana kuvakwa muChina.
(2) Kushandiswa kweMBR mumaindasitiri kurapwa kwemvura
Inofananidzwa neyekurapa tsvina yemuguta, MBR ine zvakawanda zvakanakira mumunda weindasitiri kurapwa kwemvura. Zvinoenderana nenhamba, MBR parizvino inoverengera makumi mana kubva muzana ekugadzirwa kwemvura yakasviba, uye inoshandiswa zvakanyanya mukudhinda uye kudhaya, kukora, kusanganisa magetsi, kunatsa mafuta, chikafu, petrochemicals, doro, mushonga uye marara emarara.
Prev: Zvimiro zveMBR
Zvadaro: Kupfupisa kuzivisa membrane bioreactor